Dhalista Bridge, Laabatooyinka oo Expansion Bridge, Bridge Laabatooyinka oo Expansion Tooth - Baode
About brand ee midhi
Changshu Baode Bridge Qeybta Co., Ltd. waxa uu ku yaalaa Changshu City, Historical Qaranka iyo City Cultural, Gobolka Jiangsu.
East in Shanghai, koonfureed ku ag Suzhou, West dhawaad Wuxi, Shanghai - Ning Expressway, Sujia - Hangzhou Expressway gudbaan iyo in ka badan, gaadiidka waa mid aad u sahlan. Tan iyo markii la aasaasay, Company ayaa had iyo jeer ku lifaaqan muhiimadda ugu weyn ee maamulka shirkadaha casriga ah iyo si firfircoon uga lulmado istaraatijiyad brand ah.
Badeecada soo saaray waxaa si adag sida ay caadiga ah warshadaha ee JTT327 ah - 2004 Highway Bridge Rubber Device Expansion ee Wasaaradda Isgaarsiinta oo ka mid ah Dadka Republic of China, JTT4 - 2004 Rubber Abutment Standard, JT391 - 1999 ururka ee wax soo saarka ee Basin - Type Standard .
Shirkadda ma aha oo kaliya barayaa cayn kasta oo talanti oo sanad kasta, laakiin sidoo kale waxa uu leeyahay xiriirka tababar la jaamacadaha iyo waaxyaha dalka oo dhan badan oo caan ah, si joogto ah u qabanqaabisaa khubaro, Professor si ay ula xiriiraan shaqaalaha.
Sharciga ayaa tartanka suuqa casriga ah go'aansado in shirkadaha doonayaa inaan ku guuleysto tartankaan, iyo waa in kor loogu qaado qiimaha khayraadka aadanaha iyadoo hab maamulka sayniska, iyo ballaariyo mudnaanta si xad la'aan.
Isla mar ahaantaana, si loo xoojiyo waxbarashada ganacsiga, shirkadda ayaa sidoo kale bixiya dareenka weyn in dhismaha dhaqanka ganacsi, Gaar ahaan hordhaca ah ee "iimaanka wanaagsan" dhismaha, formation of "daacadnimo, daacadnimada, niyad fiican ganacsi" dhaqanka ganacsiga.
Shirkadda daacad soo dhaweeyay design ee dunida oo dhan, unit dhismaha mashruuca ay doorteen wax soo saarka shirkada, iyo shirkadda waa diyaar u ah inay bixiyaan adeeg tayo sare leh dhismaha casriyeynta buundada.
Dhismaha lahayo ku Joint